Fotoana famakiana: 3 minitra Grande-Bretagne nitso-drano amin'ny alalan'ny tambajotra lalamby be dia be, izay nisy fiantraikany ara-tsosialy ny tantara sy ny fampandrosoana ara-toekarena ho an'ny taranaka. Ary raha misy lalamby ianao mafana fo, ny UK rail fety manamora asa amin'ny toerana mahavariana ny lalana rehetra avy any Aberdeen ho any Penzance. Ka raha sitraky ny fonao…
Fotoana famakiana: 5 minitra Disneyland Paris no matetika no voalohany Disney Park iraisam-pirenena ho an'ny mpankafy maro hitsidika. Ve ianao te-hahafantatra ny fomba tsara indrindra Disneyland drafitra ny fialan-tsasatra tao Paris nandritra ny ririnina sy ny lohataona? Dia efa tonga any amin'ny toerana! Any in Marne-la-Vallée, ambanivohitra…
Fotoana famakiana: 4 minitra Ny ankamaroan'ny mpandeha be labiera dia manana toerana ambony ao Munich amin'ny lisitra tokony hataony. Izany dia midika hoe ny Oktoberfest nomena fa ho any koa, fa ny Nockherberg Starkbierfest – Munich Strong Beer Festival mitondra zavatra fanampiny. No, tsy ny vahoaka. Ianao hiaina ny antsasaky maro. Fa ny labiera dia avo roa heny ny…
Fotoana famakiana: 7 minitra Ireo no Musings eo an-toerana tsara indrindra hatramin'izay aho sakafo nahafinaritra, nandritra ho Mpanohana ahy any Aotrisy. Aho teo amin'ny vanin-taona mafana 2016 fa ny 4 volana internship amin'ny kely-salantsalany ONG eo an-toerana. Ny traikefa internship Tena lehibe, Nahita talenta aho…
Fotoana famakiana: 3 minitra Brisbane renivohitr'i Queensland dia ary nitso-drano ny lisitra A-manintona toy ny Sea World, ny bozaka sy ny zaridaina tsara Atsimo Bank, ary Tantara Bridge sy ny maro hafa - ny lava indrindra Aostralia cantilever tetezana. Izany ihany koa ny famoronana tanàna, miaraka amin'ny tranombakoka sy galeria ary kafe kafe…
Fotoana famakiana: 4 minitra Easter fety tany Eoropa Miovaova arakaraka ny firenena ny firenena, ary amin'ny tanàna ho tanàna. Izany no iray amin'ireo tena manan-danja sy tranainy indrindra fety 'ny Fiangonana Kristianina. Paska dia ny fankalazana ny nitsanganan'i Jesosy Kristy avy tao am-pasana. Ny daty fankalazana ny Paka…